> Resource > iPhone > Sidee Macdan Notes ka iPhone kaabta on Mac
Waxaan soo saaro karaa qoraalo ka gurmad Mac iPhone?
Waxaan leeyahay codsi: waxaa ku jira barnaamij waa in ay awoodaan in ay soo saaro qoraalo ka gurmad iPhone on my Mac si aan u dhoofin karaan si aan desktop? Waan ogahay qoraalada iPhone aan lagu synced la Lugood laakiin ma aqaano sida loo badbaadin on my Mac. Mahad badan.
Si ka duwan files kale gurmad, Lugood gurmad file waa run ahaantii aan la arki karin iyo Reebnaan yaa on your Mac. Sida keliya oo aad ka eegi kartaa qoraalada ku jiro waa inaad aragto aad iPhone. Waa fikrad wanaagsan in la badbaadiyo iPhone la heli karo uyiri gurmad aad Mac baahida lama filaan ah sida iPhone jebisay lama filaan ah.
Nasiib wanaag waxaa jira barnaamij la yidhaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows) oo awood aad soo saaro qoraalo ka gurmad iPhone on your computer Mac / Windows. Waxa uu baaritaanku gurmad u yeela si aad xogta Lugood ka si degdeg ah oo ammaan ah.
Download version tijaabo ah Wondershare Dr.Fone oo uu bilaabo qoraalo laga soo qaatay gurmad iPhone hadda.
Talaabooyinka soo saaro qoraalo ka iPhone gurmad on computer Mac / Windows
Tallaabada 1. Dooro "kabsado Lugood ee kaabta File" mode
Halkan, aynu isku day la Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) in tallaabooyinka. Ka dib markii ay ku rakibidda iyo bilaabay barnaamijka aad Mac, waxaad u baahan tahay in hab soo kabasho. Si aad u soo saaro qoraalo ka gurmad Mac iPhone, fadlan dooro "kabsado Lugood ee kaabta File" mode.
Haddii aad rabto in aad si toos ah u soo saaro qoraalo ka iPhone, waxa kale oo aad dooran kartaa "kabsado Device macruufka" mode.
Halkan Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) lagu ogaan doono iyo Liiska dhan Lugood files gurmad aad Mac. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah ayaa iska leh in aad iPhone oo guji "Start Scan".
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha iyo soosaaray qoraalo ka gurmad Mac iPhone
Waxaas oo dhan waxa ku jira in aad Mac iPhone gurmad file lagu qori doonaa qaybaha sida "Xusuusaha", "Xiriirada", "Messages", iwm Waxaad ka eegi kartaa "Xusuusaha" in ay iyaga ku eegaan oo ay doortaan qoraalo ah ee aad u baahan tahay ka dibna riix "Ladnaansho" inay u dhoofiyaan iyaga aad Mac.
Waa maxay dheeraad ah:
1. Marka laga reebo ka saarida qoraalo ka iPhone gurmad on Mac, waxaad awoodi doontaa inay soo saaro faylasha kale sida sawiro, videos, jadwalka taariikhda, fariimaha, xiriirada, Bookmarks, iwm kaga imaanayo Lugood.
2. feature ugu weyn ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka waa in aad soo kaban karto xogta iPhone aad badiyay labada iPhone (diyaar u ah iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS, oo dhan iPad iyo iPod xiriiri 5/4) iyo gurmad Lugood aad Mac (la heli karo waayo, dhammaan qalabka macruufka). Waxaad ka baran kartaa halkan: sida inuu ka soo kabsado qoraalada iPhone on Mac .
Haddii aad computer Windows ah leeyihiin, version Windows ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) waa xalka ugu fiican ee aad u soo saaro xogta ka gurmad Lugood ama ka soo kabsadaan xogta iPhone on computer Windows aad. Dheeraad ah ka baro halkan: Windows iPhone gurmad shawladda .
Sida loo soo celiya iPhone ka kaabta iPad